एक विश्वास रहित नेटवर्क के हो, विश्वासको आवश्यकता बिना - काजू
घर » घर » विश्वस्त नेटवर्क के हो, विश्वासको आवाश्यकता बिना
ट्याग: ब्लक दल, केन्द्रीकृत प्रणाली, विकेन्द्रीकृत प्रणाली, अविश्वासी
एउटा प्रणाली अविश्वासी यसको मतलब यो हो कि सहभागीहरूले एक अर्कालाई जान्न वा विश्वास गर्न आवश्यक पर्दैन वा प्रणालीले काम गर्नको लागि तेस्रो पक्षलाई विश्वास गर्न आवश्यक पर्दैन। विश्वासको आवश्यकता बिना वातावरणमा त्यहाँ प्रणालीमा अधिकार रहेको कुनै एकल अस्तित्व छैन, र सहमति एक-अर्कालाई थाहा वा विश्वास नगरी सहभागीहरू बिना पुग्न सकिन्छ यदि प्रणाली आफैंको होईन भने.
एक पियर-टू-पियर (P2P) नेटवर्कमा अविश्वसनीय हुनुको स्वाभाविक सम्पत्ति बिटकॉइन द्वारा शुरू गरिएको थियो, किनकि यसले सबै लेनदेन डाटालाई प्रमाणीकरण गर्न सक्दछ र अपार भण्डार गर्न सक्दछ blockchain सार्वजनिक
ट्रस्ट लेनदेन को विशाल बहुमत मा अवस्थित छ र अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यद्यपि विश्वासको आवश्यकता बिना प्रणालीहरूले आर्थिक अन्तरक्रियाको परिभाषा गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ मानिसहरूलाई संस्था वा अन्य तेस्रो पक्षहरू भन्दा अमूर्त अवधारणाहरूमा विश्वास गर्न।
यो विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि "अविश्वसनीय" प्रणालीहरूले पूर्ण रूपमा विश्वासलाई हटाउँदैनन्, बरु तिनीहरूले यो वितरण अर्थव्यवस्था को एक प्रकार मा केहि ब्यवहार लाई प्रोत्साहित गर्छ। यी अवस्थाहरूमा यो भन्नु सही हो कि विश्वास कम छ तर हटाइएको छैन।
I केन्द्रीकृत प्रणाली म हैन अविश्वासी सहभागीहरूले प्रणालीमा केन्द्रीय बिन्दुमा शक्ति प्रत्यायोजन गर्ने र निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न यसलाई अधिकृत गर्ने रूपमा। केन्द्रीकृत प्रणालीमा, जबसम्म तपाईं विश्वासिलो तेस्रो पक्षलाई विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ, प्रणालीले उद्देश्यको रूपमा काम गर्नेछ। तर समस्याहरु, धेरै गम्भीर समस्याहरु को बारे मा सावधान रहनुहोस्, यो पैदा हुन सक्छ यदि भरोसा संस्था ... विश्वसनीय छैन। केन्द्रीकृत प्रणालीहरू प्रणाली विफलता, आक्रमण वा ह्याकि toको खतरामा छन्। केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा कुनै सार्वजनिक अधिकारपत्र बिना डाटा परिवर्तन गर्न वा हेरफेर गर्न पनि सकिन्छ।
म Binance जस्तो केन्द्रीकृत प्रणालीमा विश्वास गर्दछु, जुन मलाई विश्वास छ अविश्वसनीय रूपमा गम्भीर र भरपर्दो छ। तपाई यहाँ गाईड पढ्न सक्नुहुन्छ बुझ्न को लागी Binance के हो र यो कसरी प्रयोग गर्ने। के तपाइँ Binance मा cryptocurrency खरीद गर्न चाहनुहुन्छ? ठीक छ, तलको बटन थिचेर यो गर्नुहोस्: तपाईं प्राप्त गर्नुहुनेछ २०% कमीशनमा छुट, सँधै! किन छैन?
BYANCE मा CRYPTOCURRENCIES खरीद गर्नुहोस्
अब हामी एक सानो दार्शनिक प्राप्त गरौं, तर मसँग टाँसौं: जब यो पैसाको कुरा आउँछ, केन्द्रीकृत प्रणालीमा विकेन्द्रीकृत प्रणालीहरू भन्दा अधिक व्यापक अपील हुन सक्छ (जुन हो अविश्वासी), किनकि मानिसहरू प्रणाली भन्दा नभई संगठनहरूतर्फ भरोसा बढाउँदै खुशी छन्। जहाँसम्म, संगठनहरू सजिलैसँग घूस दिइएका मानिसहरू मिलेर बनेका छन्, विश्वासको आवश्यकता बिना प्रणालीहरू पूर्ण रूपमा कम्प्युटर कोड द्वारा शामेल गर्न सकिन्छ.
Bitcoin र work blockchains को अन्य प्रमाण उनीहरूको स्वामित्व प्राप्त अविश्वासी इमानदार व्यवहारको लागि आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान गर्दै। नेटवर्क सुरक्षा कायम गर्न मौद्रिक प्रोत्साहन छ, र विश्वास धेरै सहभागीहरु बीच वितरित छ। यसले ब्लकचेनलाई असुरक्षा र आक्रमणहरूमा प्रतिरोधी बनाउँदछ, जबकि असफलताको एकल पोइन्टहरू हटाउँदा।
अघिल्लो लेखब्लकचेन को इतिहास
Gate.io एक्सचेंज 2021 समीक्षा, यो Bitcoin खरीद गर्न सुरक्षित छ?